Gini mere iPhone Batrị m Ji Anwu Oso? Lee ihe The Real Idozi! - Iphone
iphone 6 ihuenyo adịghị
ngwa rapaara na ichere mgbe emeghachisịrị
oku Wi -Fi iphone anaghị arụ ọrụ
gini kpatara ihuenyo iphone m ji oji
Gini mere iPhone Batrị m Ji Anwu Oso? Nke a bụ The Real Idozi!
Aga m agwa gị kpọmkwem ihe mere gị iPhone batrị drains ngwa ngwa na kpọmkwem otu esi edozi ya . Aga m akọwa otu ị ga-esi nweta ndụ batrị ogologo site na iPhone gị na-enweghị ịchụ ọrụ. Were okwu m maka ya:
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nsogbu batrị iPhone bụ metụtara software.
Anyị ga-ekpuchi ọtụtụ pụtara iPhone batrị fixes na m mụtara na ahụmịhe mbụ na ọtụtụ narị iPhones ka m na-arụ ọrụ Apple. Nke a bụ otu ihe atụ:
Gị iPhone egwu na dekọọ ọnọdụ gị n'ebe ọ bụla ị na-aga. Nke ahụ na-eji otutu nke ndụ batrị.
Afọ ole na ole gara aga (na mgbe ọtụtụ ndị mere mkpesa), Apple gụnyere ngalaba ọhụrụ nke Ntọala akpọ Batrị . Ọ na-egosiputa ụfọdụ ozi bara uru, mana ọ gaghị enyere gị aka ndozi ihe ọ bụla. M degharịrị isiokwu a iji meziwanye ndụ batrị iOS 12, ma ọ bụrụ na ịnara aro ndị a, M na-ekwe nkwa na ndụ batrị gị ga-aka mma , ma i nwere iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, ma ọ bụ iPhone X.
Emechara m kee a Vidio YouTube na-aga na iPhone batrị fixes m na-akowa na isiokwu a. Ma ị na-ahọrọ ịgụ ma ọ bụ ile anya, ị ga-ahụ otu nnukwu ozi ahụ na vidiyo YouTube ị ga-agụ n’isiokwu a.
Ndụmọdụ mbụ anyị bụ ezigbo ibu ụra na-ehi ụra na enwere ihe kpatara na ọ bụ # 1: Idozi Push Mail nwere ike ime a dị egwu ihe dị iche na ndụ batrị nke iPhone gị.
kedu ihe kadinal uhie pụtara
Na Ezigbo Ihe Mere iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod Batrị Nwụrụ Ngwa ngwa
Mgbe edoziri ozi gị Kwaa , ọ pụtara na iPhone gị na-ejigide njikọ gị na ihe nkesa email gị mgbe niile ka ihe nkesa ahụ wee nwee ike Kwaa ozi na iPhone gị ozugbo ọ rutere. Ọ dị mma, nri? Njọ.
Otu onye ndu ọgụgụ isi Apple kọwara m otu a: Mgbe edoziri iPhone gị ịkwanye, ọ na-ajụkarị ihe nkesa ahụ, 'Enwere mail? Enwere mail? Enwere mail? ”, Na data a na-eme ka batrị gị gbapụ ngwa ngwa. Exchange sava bụ kpam kpam kasị njọ omempụ, ma onye obula nwere ike irite uru site n'ịgbanwe ọnọdụ a.
Etu esi edozi ozi ozi
Idozi nsogbu a, anyị ga-agbanwe gị iPhone si Kwaa ka ozi kpọtara. ’Ll ga-echekwa ọtụtụ ndụ batrị site na ịgwa iPhone gị ka ịlele maka ozi ọhụụ ọ bụla na 15 nkeji ọ bụla oge niile. Gị iPhone ga-enyocha maka ozi ọhụụ mgbe ọ bụla ị mepere ngwa Mail.
Gaa na Ntọala -> Nnabata & Okwuntughe -> Weta data ohuru .
Gbanyụọ Kwaa n’elu.
Pịgharịa gaa na ala ma họrọ Nkeji 15 ọ bụla n'okpuru Ozi kpọtara .
Kpatụ na akaụntụ email ọ bụla ma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, gbanwee ya Ozi kpọtara .
Ntọala -> Nnabata & Okwuntughe -> Weta data ohuru
Mee ka 15 gaa nkeji
Gbanwee akaụntụ kpọtara
Imirikiti mmadụ kwenyere na ichere nkeji ole na ole ka email rute bara uru maka mmụba dị mkpa na ndụ batrị iPhone gị.
Dị ka akụkụ, ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịmekọrịta kọntaktị ma ọ bụ kalenda n'etiti iPhone, Mac, na ngwaọrụ ndị ọzọ, lelee isiokwu m ọzọ akpọrọ Kedu ihe kpatara ụfọdụ kọntaktị m ji efu efu site na iPhone m, Emmanuel, ma ọ bụ iPod? Nke a bụ The Real Idozi!
Aga m egosi gị ọrụ ndị zoro ezo nke na-ehichapụ batrị gị mgbe niile, na m dị njikere ịkụ nzọ ị nụtụbeghị ọtụtụ n'ime ha. Ekwenyere m na ọ dị mkpa maka gị ịhọrọ mmemme na ọrụ ndị nwere ike ịnweta ọnọdụ gị, ọkachasị nyere ịgba batrị dị ịrịba ama na nsogbu onwe onye na-abịa na gị iPhone, nri nke igbe.
Etu esi edozi ọrụ ebe
Gaa na Ntọala -> Nzuzo -> Ọrụ Ọnọdụ .
Kpatụ Kekọrịta Ọnọdụ m . Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ike ịkekọrịta ọnọdụ gị na ezinụlọ gị na ndị enyi na Ozi ngwa, wee hapụ nke a, mana kpachara anya: Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ soro gị, nke a bụ otú ha ga-esi mee ya.
Pịgharịa gaa na ala wee pịa Ọrụ sistemụ . Ka anyi kpochapu echiche na-ezighi ezi ozugbo: Imirikiti ntọala ndị a bụ maka izipu data ka Apple maka ahia na nyocha. Mgbe anyị gbanyụrụ ha, iPhone gị ga-anọgide na-arụ ọrụ dịka ọ na-arụ.
Gbanyụọ ihe niile na peeji nke ma e wezụga Mberede SOS , Chọta My iPhone (yabụ ị nwere ike ịchọta ya ma ọ bụrụ na ọ furu efu) na Mmegharị mmegharị & Anya (ọ bụrụ n'ịchọrọ iji iPhone gị dị ka pedometer - ma ọ bụghị, gbanyụọ nke ahụ kwa). Gị iPhone ga-arụ ọrụ kpọmkwem dị ka ọ na mbụ. Kompas ahụ ka ga-arụ ọrụ ma ị ga - ejikọ na selụ elu sel ọfụma - ọ bụ naanị na Apple agaghị anata data gbasara omume gị.
Kpatụ Ọnọdụ Dị Signrịba Ama . You maara gị iPhone e nsuso gị ebe niile gị gaba? Nwere ike iche n'echiche nsogbu nke a na-etinye na batrị gị. Ekwadoro m gị gbanyụọ Ọnọdụ Dị Signrịba Ama . Kpatụ ịlaghachi na menu Ọrụ Ọrụ Ndị Isi.
Gbanyụọ ngbanwe niile n'okpuru Mmelite ngwaahịa . Ndị a na-eziga ozi iji nyere Apple aka imeziwanye ngwaahịa ha, emela ka iPhone gị rụọ ọrụ nke ọma.
Pịgharịa gaa na ala ma gbanye Ogwe Ogwe Ọnọdụ . N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-ama na a na-eji ọnọdụ gị eme ihe mgbe obere akụ na-egosi n'akụkụ batrị gị. Ọ bụrụ na akụ ahụ dị na oge niile, enwere ike enwere ihe na-ezighi ezi. Kpatụ ịlaghachi na nchịkọta nhọrọ Ọrụ Ndị Isi.
Gbanyụọ Ọrụ Ọnọdụ maka ngwa ndị na-achọghị ịma ebe ị nọ.
Ihe ị kwesịrị ịma: Ọ bụrụ na ị hụ akụ odo odo na-esote ngwa, ọ na-eji ọnọdụ gị ugbu a. Àkụ isi awọ pụtara na ejirila ọnọdụ gị n'ime awa 24 gara aga yana akara ngosi odo odo pụtara na ọ na-eji a ikike (banyere geofences mgbe e mesịrị).
Lezienụ anya na ngwa ọ bụla nwere odo odo ma ọ bụ akụ isi awọ n'akụkụ ha. Ngwa ndị a kwesiri ịma ọnọdụ gị iji rụọ ọrụ? Ọ bụrụ na ha emee, nke ahụ dị oke mma - hapụ ha. Ọ bụrụ na ha emeghị, pịa aha ngwa ahụ wee họrọ Mgbe ịkwụsị ngwa site na-enweghị isi agwụ batrị gị.
Gbanyụọ Ọrụ sistemụ
Gbanyụọ Ebe Dị .rịba Ama
Gbanyụọ na-enweghị isi ngwa
Okwu Banyere Geofencing
.B. ikike bụ mebere perimeta gburugburu ebe. Ngwa na-eji geofencing iji zitere gị ihe ngosi mgbe ị rutere ma ọ bụ pụọ na ebe ị na-aga. Ọ bụ ezigbo echiche, mana maka ị na-arụ ọrụ ịrụ ọrụ, iPhone gị ga-eji GPS mgbe niile ịjụ, 'Ebee ka m nọ? Ebee ka m nọ? Ebee ka m nọ? ”
Anaghị m akwado iji ngwa ndị na-eji geofencing ma ọ bụ ebe alerts n'ihi ọnọdụ nke ọtụtụ ikpe m hụrụ ebe ndị mmadụ na-enweghị ike ime ka ọ gafee ụbọchị zuru ezu na-enweghị mkpa ịgba ụgwọ iPhone ha - na geofencing bụ ihe kpatara ya.
3. Ezipụla iPhone nchịkọta (Diagnostics & Usage Data)
Nke a bụ ngwa ngwa: Isi na Ntọala -> Nzuzo , pịgharịa gaa na ala, ma mepee Nchịkọta . Gbanyụọ mgba ọkụ na-esote Share iPhone Analytics na Share iCloud Analytics iji kwụsị iPhone gị na izipu data na-akpaghị aka na Apple banyere otu ị si eji iPhone.
4. Mechie ngwa gị
Otu ugboro kwa ụbọchị ma ọ bụ abụọ, ọ bụ ezi echiche ịmechi ngwa gị. Na ụwa zuru oke, ị gaghị eme nke a ma ọtụtụ ndị ọrụ Apple agaghị asị na ị ga-eme ya. Ma ụwa nke iPhones bụ ọ bụghị zuru oke - ọ bụrụ na ọ bụ, ị gaghị agụ isiokwu a.
Achọghị ngwa na-emechi Mgbe M laghachiri na Ihuenyo mbu?
Mba, ha anaghị. Ha kwesiri ịbanye na a kwụsịtụrụ mode ma nọrọkwa na nchekwa nke mere na mgbe ị mepee ha, ị bulie aka nri ebe ị kwụsịrị. Anyị anaghị ebi na iPhone Utopia: Ọ bụ eziokwu na ngwa nwere chinchi.
A otutu batrị igbapu okwu na-eme mgbe ngwa dị chere imechi, mana anaghị eme. Kama, ngwa ahụ na-akụ na ndabere na gị iPhone batrị Nigeria ka igbapu-enweghị gị ọbụna mara ya.
A n'iyi ngwa nwekwara ike ime ka gị na iPhone na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na nke ahụ na-eme gị, lelee edemede m akpọrọ Gịnị Mere My iPhone Ji Enwe ọkụ? iji chọpụta ihe kpatara ya ma mezie ya maka ihe ọma.
bọtịnụ ike na iphone m araparawo
Etu aga-esi mechie ngwa gị
Pịa bọtịnụ Home pịa ma ị ga-ahụ iPhone ngwa switcher . Ngwa switcher na-enye gị ohere ịhụ ngwa niile echekwara na ebe nchekwa nke iPhone gị. Iji chọgharịa na ndepụta ahụ, jiri mkpịsị aka gị wegharịa n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri. M nzọ ị ga-eju anya site ọtụtụ ngwa na-emeghe!
Iji mechie ngwa, jiri mkpịsị aka gị swipe na ngwa ahụ wee kpupụ ya n'elu ihuenyo ahụ. Ugbu a ị nwere n'ezie emechi ngwa ma ọ nweghị ike igbapu batrị gị na ndabere. Na-emechi ngwa gị mgbe hichapụ data ma ọ bụ kpatara nsogbu ọ bụla na - adịghị mma - ọ nwere ike inyere gị aka ị nweta ndụ batrị kacha mma.
Swipe aka ekpe na aka nri ihu ngwa nghe
Gbanye ngwa ngwa n'elu ihuenyo ka imechi
Kedu ka m ga-esi mara ma ngwa egwu adakwasịla na iPhone m? Ihe niile Dị Mma!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe akaebe, gaa Ntọala -> Nzuzo -> Nchịkọta -> Data nchịkọta . Ọ bụghị dị mkpa ihe dị njọ ma ọ bụrụ na edepụtara ngwa ebe a, mana ọ bụrụ na ị hụ ọtụtụ ntinye maka otu ngwa ma ọ bụ ngwa ọ bụla edepụtara n'okpuru Kacha ọhụrụ na , ị nwere ike ịnwe nsogbu na ngwa ahụ.
Nsogbu mmechi ngw
Na nso nso a, ahụla m isiokwu na-ekwu na imechi ngwa gị bụ n'ezie emerụ ka iPhone batrị. Isiokwu m kporo Na-emechi iPhone Apps A Bad Echiche? Mba, Leekwa ihe kpatara ya. na-akọwa akụkụ abụọ nke akụkọ a, yana gịnị kpatara ịmechi ngwa gị n'ezie bu ezigbo echiche mgbe ị na-ele anya na nnukwu foto.
5. ificationsma Ọkwa: Naanị Jiri Ndị Need Chọrọ
Ma Ọkwa: Ọ D or MMA ma ọ bụ Ekwela?
Anyị niile ahụla ajụjụ ahụ mbụ mgbe anyị mepere ngwa maka oge mbụ: Ngwa Ga-amasị Gị Zitere gị Push ificationsma Ọkwa ”, na anyị na-ahọrọ Ọ DỊ MMA ma ọ bụ Ekwela ka . Ọ bụ mmadụ ole na ole ghọtara olee mkpa ọ bụ ịkpachara anya banyere ngwa ndị ị na-ekwu OK.
Mgbe ị hapụrụ ngwa zitere gị Nkwupụta Push, ị na-enye ngwa ahụ ikike iji nọgide na-agba n'okirikiri ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe emee na ị na-eche banyere ya (dịka ịnweta ozi ederede ma ọ bụ otu egwuregwu kachasị amasị gị na-emeri egwuregwu), ngwa ahụ nwere ike izitere gị ozi iji mee ka ị mara.
Ma Ọkwa dị mma, mana ha mee igbapu batrị. Anyị kwesịrị ka amara gị ọkwa mgbe anyị natara ozi ederede, mana ọ dị mkpa maka anyị ịhọrọ nke ndị ọzọ ngwa ọdịnala na-ekwe ka iziga anyị notma Ọkwa.
Ntọala -> .ma ọkwa
Etu aga esi edozi ndozi
Gaa na Ntọala -> .ma ọkwa ma ị ga-ahụ ndepụta nke ngwa gị niile. N'okpuru aha ngwa ọ bụla, ị ga-ahụ ma Gbanyụọ ma ọ bụ ụdị nke thatma Ọkwa na ngwa na-ekwe ka zitere gị: Akara, undsda, ma ọ bụ Ọkọlọtọ . Eleghara ngwa ọdịnala na-ekwu Gbanyụọ ma lee anya na ndepụta ahụ. Ka ị na-aga, jụọ onwe gị ajụjụ a: 'Achọrọ m ịnata ọkwa site na ngwa a mgbe ọ na-emeghe?'
kedu ka m ga -esi tinye ihe nbipute na iphone m
Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, hapụ ihe niile ka ọ dị. Ọ dị ezigbo mma ịhapụ ụfọdụ ngwa iji gwa gị. Ọ bụrụ na azịza ya bụ mba, ọ dị mma ka ịgbanyụ amamọkwa maka ngwa ahụ.
Iji gbanyụọ amamọkwa, pịa aha ngwa ahụ ma gbanyụọ ngbanwe dị n'akụkụ Ekwe ka Amamọkwa . Enwere nhọrọ ndị ọzọ na ebe a, mana ha anaghị emetụta ndụ batrị iPhone gị. Naanị ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na agbanwere ma ọ bụ gbanye ọkwa.
Offma Ọkwa agbanyụrụ
6. Gbanyụọ Ngwaọrụ Don’t Na-anaghị Eji
Wijetị bụ obere “ngwa ọdịnala” nke na-aga n'ihu na ndabere nke iPhone gị iji nye gị ohere ịnweta ozi ọhụụ site na ngwa ndị kachasị amasị gị. N'ime oge, ị ga-echekwa nnukwu ndụ batrị site na ịgbanyụ wijetị ị na-ejighi. Ọ bụrụ na ịnweghị iji ha, Ọ dị mma iji gbanyụọ ha niile.
Iji nweta wijetị gị, pịa bọtịnụ Home iji gaa na Ihuenyo mbu nke iPhone gị na si n'aka ekpe gafee n'aka nri ruo mgbe ị rutere wijetị. Mgbe ahụ, pịgharịa gaa na kpatụ okirikiri Dezie bọtịnụ. Lee ị ga-ahụ ndepụta wijetị ị nwere ike itinye ma ọ bụ wepu na iPhone gị. Iji wepu wijetị, pịa bọtịnụ mwepu uhie na aka ekpe ya.
7. Gbanyụọ ekwentị gị otu ugboro n’izu (Rightzọ Ziri Ezi)
Ọ bụ ndụmọdụ dị mfe mana ọ dị mkpa na agbanyeghị: offgbanye iPhone gị ma laghachi azụ otu ugboro n’izu nwere ike idozi nsogbu batrị zoro ezo nke gbakọtara na oge. Apple agatụghị agwa gị na n'ihi na iPhone Utopia, ọ gaghị.
Na ụwa n'ezie, iwepụ iPhone gị nwere ike inye aka dozie nsogbu na ngwa ndị kwụsịrị ma ọ bụ ndị ọzọ, nsogbu ndị ọzọ nwere ike ibute mgbe ọ bụla komputa abanyela kemgbe.
Okwu ịdọ aka na ntị: Egbula bọtịnụ ike na bọtịnụ ụlọ n'otu oge iji mechie iPhone gị. A na-akpọ nke a “nrụpụta siri ike”, na ekwesịrị naanị iji ya mgbe ọ dị oke mkpa. Ọ dị ka ịpịpụ desktọpụ desktọọpụ site na iwepụ plọg ahụ na mgbidi.
Esi gbanyụọ iPhone gị Nri )Zọ)
Iji gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' pụtara. Swipe akara ngosi ike okirikiri na mkpịsị aka gị wee chee ka iPhone gị kwụsịrị. Ọ bụ ihe nkịtị maka usoro iji ọtụtụ sekọnd. Ọzọ, gbanwee iPhone gị site na ịpị na ijide bọtịnụ ike ruo mgbe ị hụrụ akara Apple gosipụtara.
8. N'azụ App Ume
Ndabere App Ume
Allowedfọdụ ngwa na iPhone gị ka enyere ka ị jiri Wi-Fi ma ọ bụ njikọ data cellular gị budata ọdịnaya ọhụụ ọbụlagodi na ị naghị eji ha. Nwere ike ịchekwa a ịrịba ego nke ndụ batrị (na ụfọdụ nke gị data plan) site na ịmachi ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọdịnala na-ekwe ka iji nke a mma na Apple na-akpọ Background App Refresh.
Etu esi edozi ngwa ngwa ngwa
Gaa na Ntọala -> General -> Nmeghachi ngwa ngwa . Na elu, ị ga-ahụ ntụgharị ntụgharị nke na-agbanyụ Background App Refresh kpamkpam. Adịghị m akwado ka ị mee nke a, n'ihi na Background App Refresh nwere ike bụrụ ihe dị mma maka ụfọdụ ngwa. Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị ga-enwe ike gbanyụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ọ bụla na ndepụta ahụ.
Ka ị na-agagharị na ngwa ọ bụla, jụọ onwe gị ajụjụ a: “Achọrọ m ka ngwa a nwee ike ibudata ozi ọhụụ ọbụlagodi mgbe m nọ ọ bụghị iji ya eme ihe? ” Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, hapụ Mụrụ App App Refresh nyeere. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbanyụọ ya ma ị ga-echekwa ndụ batrị oge ọ bụla ị mere.
9. Nọgidenụ na-iPhone Cool
Apple, iPhone, iPad, na iPod na-arụ ọrụ site na 32 degrees 95 degrees fahrenheit (0 degrees to 35 Celsius Celsius). Ihe ha anaghị agwa gị mgbe niile bụ na ikpughe iPhone gị na okpomọkụ karịrị 95 degrees fahrenheit nwere ike ibibi batrị gị kpamkpam.
Ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị na-ekpo ọkụ ma ị na-aga ije, echegbula ya - ị ga-adị mma. Ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ogologo oge ikpughere na oke oke okpomọkụ. Omume nke akụkọ: Dị ka nkịta gị, ahapụla iPhone gị n'ime ụgbọ ala na-ekpo ọkụ. (Mana ọ bụrụ na ịhọrọ, chekwaa nkịta ahụ).
Nzuzo ihu igwe enwere ike imebi batrị iPhone m?
Obere okpomọkụ agaghị emebi batrị iPhone gị, mana ihe na-eme eme: Oyi karie otutu, ngwa ngwa batrị gi na ada. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala, iPhone gị nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ kpamkpam, mana mgbe ọ dị ọkụ ọzọ, iPhone na ọkwa batrị kwesịrị ịlaghachi na nkịtị.
10. Gbaa mbọ hụ na Mkpọchi Mkpọchi agbanwuru
Otu ngwa ngwa ụzọ gbochie batrị iPhone batrị igbapu bụ site n'ịhụ na akpaaka-mkpọchi agbanwuru. Mepee Ntọala ngwa wee pịa Ngosipụta & Ihie -> Mkpọchi akpaaka . Wee họrọ nhọrọ ọ bụla na-abụghị mgbe! Nke a bụ oge ị nwere ike ịhapụ iPhone gị tupu ngosipụta agbanyụọ wee banye n'ọnọdụ ụra.
11. Gbanyụọ Ọhụhụ Na-adịghị Mkpa
iPhones mara mma, site na ngwaike na ngwanrọ ahụ. Anyị ghọtara echiche bụ isi nke imepụta akụrụngwa akụrụngwa, mana gịnị na-enye ngwanrọ ahụ ohere igosipụta ọmarịcha ihe oyiyi ahụ? Inside your iPhone, a obere mpempe ngwaike wuru n'ime mgbagha osisi a na-akpọ a Graphics Processing Unit (ma ọ bụ GPU) na-enye gị iPhone ike iji gosipụta ya mara mma visual mmetụta.
Nsogbu ndị GPU nwere bụ na ha na-enwe agụụ mgbe niile. Ihe ndị a na-ahụ anya na-ahụ anya, ngwa ngwa batrị na-anwụ. Site na mbenata nsogbu na GPU nke iPhone gị, anyị nwere ike ịbawanye ndụ nke batrị gị. Kemgbe a tọhapụrụ iOS 12, ị nwere ike mezuo ihe niile m na-atụ aro na ndụmọdụ ole na ole dị iche iche site na ịgbanwee otu ntọala n'otu ebe ị nwere ike ị gaghị eche ile anya.
igwe ojii verizon anaghị arụ ọrụ na 2018
Gaa na Ntọala -> Nweta -> Motion -> Belata Motion pịa mgbata ọkụ ka ọ gbanye ya.
Wezụga parallax wallpaper mmetụta na Ihuenyo mbu, ikekwe ị gaghị achọpụta ọ bụla esemokwu na ị ga - echekwa nnukwu ndụ batrị.
12. Tụgharịa na kacha Battery Nchaji
Kachasị Batrị odori na-ahapụ gị iPhone na-amụta banyere gị odori àgwà iji belata ala batrị ịka nká. Anyị na-akwado ịgbanye ntọala a ka ị nwee ike nweta ọtụtụ batrị iPhone gị ogologo oge.
Mepee Ntọala wee pịa Batrị -> Batrị Health . Mgbe ahụ, gbanye mgba ọkụ na-esote na-ebuli maka ịdebe batrị.
13. DFU Weghachi & Weghachi Site iCloud, Ọ bụghị iTunes
N'oge a, ị cherela otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ na ndụ batrị gị akabeghị. Oge eruola iweghachi iPhone gị . Anyị na-akwado na-eme a DFU weghachi . Mgbe weghachite gwụchara, anyị na-akwado iweghachi site na nkwado ndabere iCloud ma ọ bụrụ na ị nwere ike.
Ka m dokwuo anya: Ee, ịkwesịrị iji iTunes iji weghachi iPhone gị - ọ nweghị ụzọ ọzọ. Anyị na-ekwu maka otu ị si tinye data gị na iPhone gị mgbe eweghachiri ya na ntọala ụlọ ọrụ.
Peoplefọdụ ndị na-enwe mgbagwoju anya banyere kpọmkwem mgbe ole odi mma iwepu iPhone gi na komputa gi. Ozugbo ị hụrụ ihuenyo 'Ndewo' na iPhone gị ma ọ bụ 'Melite iPhone gị' na iTunes, ọ dị ezigbo mma ịkwụpụ iPhone gị.
Ọzọ, jiri menu dị na ekwentị gị iji jikọọ Wi-Fi ma weghachite site na nkwado ndabere iCloud. Ọ bụrụ na ị nweela nsogbu ịkwado iCloud na karịsịa ọ bụrụ na nchekwa gị agwụla, lelee isiokwu m gbasara esi idozi iCloud ndabere.
Ndi iCloud Backups na iTunes Backups Niile Otu?
Ee, iCloud backups na iTunes backups mee nwere nnabata otu ọdịnaya. Ihe mere m ji akwado iji iCloud bụ na ọ na-ewe kọmputa gị na nsogbu ọ bụla ọ nwere ike ịnwe kpamkpam na foto ahụ.
15. I Nwere Ike Inwe Nsogbu Akụrụngwa (Ma Ọ gaghị abụ Batrị)
Na mbido isiokwu a, ekwuru m na imirikiti okwu metụtara ndụ batrị iPhone sitere na ngwanrọ, nke ahụ bụkwa eziokwu. Enwere oge ole na ole okwu ngwaike nwere ike na-akpata nsogbu, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọnọdụ ọ bụla nsogbu adighi na batrị.
Ntufu na nkwafu nwere ike ibute mmebi nke ihe di n'ime ya nke na-etinye ego ma obu na-aru oru na iPhone gi. A na-eme batrị n'onwe ya ka ọ bụrụ ezigbo ike, n'ihi na ọ bụrụ na a dụọ ya, ọ nwere ike ịgbawa n'ụzọ nkịtị.
Nnwale Batrị Apple Store
Mgbe ị wetara iPhone gị na Storelọ Ahịa Apple ka a rụọ ọrụ, Apple techs na-agba ọsọ nyocha ngwa ngwa nke na-ekpughe oke ozi gbasara ahụike nke iPhone gị. Otu n'ime nchọpụta a bụ ule batrị, ọ gafeela / daa. N'oge m niile na Apple, ekwenyere m na m hụrụ mkpokọta iPhones abụọ nwere batrị anaghị agafe ule ahụ - m wee hụ otutu nke iPhones.
Ọ bụrụ na iPhone gị gafere ule batrị ahụ, enwerekwa ohere 99% ọ ga-adị, Apple ga ọ bụghị dochie batrị gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọ n'okpuru akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na ịnatabeghị usoro ndị m kọwara na edemede a, ha ga-eziga gị n'ụlọ ka ị mee ha. Ọ bụrụ na ị nwee eme ihe m tụrụ aro, ị nwere ike ịsị, 'Agbalịrị m nke ahụ ugbua, ọ rụghị ọrụ.'
Ọ bụrụ n’ezie Tochọrọ Repnọchi Batrị Gị
Ọ bụrụ na ị bụ n'aka ị nwere nsogbu batrị ma ị na-achọ ọrụ nkwụnye ego batrị dị ọnụ ala karịa Apple, ana m akwado ya Pulse , ọrụ ndozi nke ga-abịakwute gị n'ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ gị ma dochie batrị gị ka ị na-eche, n'ime obere oge 30.
Eji m obi m niile na ọ masịrị gị ịgụ ma mụta ihe site na isiokwu a. Ide ya bu oru nke ihunanya, enwere m obi ekele n’ebe onye obula na agu ya ma nyefee ya ndi enyi ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ, hapụ okwu n'okpuru - Ọ ga-amasị m ịnụ n'ọnụ gị.